Ọ bụ naanị ndị ọgaranya ga-enwe ike ị nweta ezumike n'ọdịnihu?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ọ bụ naanị ndị ọgaranya ga-enwe ike ị nweta ezumike n'ọdịnihu?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
A jụrụ ihe dị ka ndị ọkachamara 1000 si gburugburu ụwa gbasara mmetụta mmụba ọnụ ahịa a na-atụ anya ya n'ihi ọrịa na-efe efe n'ahịa niile.
Ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ na-ekewakwa ma ọ bụ naanị ndị ọgaranya ga-enwe ike ị nweta ezumike n'ọdịnihu, nyocha nke WTM London wepụtara taa (Monday 1 November) nke WTM London, bụ isi ihe omume zuru ụwa ọnụ maka ụlọ ọrụ njem.
A jụrụ ihe dị ka ndị ọkachamara 1000 si gburugburu ụwa gbasara mmetụta mmụba ọnụ ahịa a na-atụ anya ya n'ihi ọrịa na-efe efe n'ahịa niile. Ihe karịrị ọkara (51%) nwere nchegbu na njem ga-abụ nchekwa nke ndị ọgaranya, yana 49% ekwetaghị.
Akụkọ ụlọ ọrụ WTM jụkwara banyere ọnụ ọgụgụ nke mmụba ahụ, yana nsonaazụ net na-akwado na a na-atụ anya na ọnụahịa ga-abawanye na 2022. Ihe karịrị otu n'ime atọ (35%) nke ihe nlele ahụ kwuru na ọnụ ahịa nwere ike ịrị elu site na ya. n'etiti 1% na 20% tụnyere afọ ugbu a. Agbanyeghị, nrụgide ọnụ ahịa siri ike yana mkpa iji nwetaghachi ego ndị furu efu n'oge ọrịa a pụtara na ihe karịrị otu n'ime mmadụ iri (12%) na-atụ anya ibuli ọnụ ahịa ihe karịrị 20%.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ na-atụ anya na ọnụ ahịa ga-ada na 15% na-ebu amụma ọdịda dị ala nke dị n'etiti 1% na 20%, ebe 9% kwuru na ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ha ga-ada nke ukwuu, site na ihe karịrị 20%.
Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ ise (22%) na-atụ anya na ọnụ ahịa ga-abụ otu.
Ndị na-azụ ahịa UK makwaara na mmetụta ejima nke COVID-19 na Brexit na ọnụ ahịa nwere ike imetụta ikike njem, ebe 70% kwetara na nke a bụ nchegbu maka ọdịnihu.
Simon Press, WTM London, Onye isi ngosi ihe ngosi, kwuru, sị: “Na UK, ọnụ ahịa njem mba ofesi maka oge ọkọchị na-adaba site n'ịkwụ ụgwọ maka nnwale, ebe ọchichi maka ọnụnọ butere ụkọ na ọnụ ahịa. Nrụgide ndị a akọwapụtara nwere ike ma ọ bụ na ọ gaghị adị irè maka afọ na-abịa, mana nsonaazụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ enweghị mgbagha - ọnụ ahịa ga-ebili na 2022.
"Ọtụtụ ngalaba na njem na-ebugharị ozi ndị ahịa ha ka ọ bụrụ 'uru' kama 'ọnụahịa'. Ihe ịma aka maka ụlọ ọrụ ahụ bụ ịhụ na ha nwere ike ịnye ngwaahịa na ahụmịhe nke na-eme ka ọnụ ahịa na-abawanye na onye njem na nke na-ejigide oke ha, mana na-enweghị atụpụta onwe ha n'ahịa. "